ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မွေးနေ့ အထိမ်းအမှတ် ရန်ကုန်မြို့ ဆန္ဒပြပွဲမြင်ကွင်း။ (ဇွန် ၁၉၊ ၂၀၂၁)
ကိုဝင်းမင်း ။.။ ဟုတ်ကဲ့ ၊မြန်မာစစ်ကောင်စီမှာပါတဲ့ တိုင်းရင်းသားပါတီအဖွဲ့ဝင် စောဒယ်နီရယ်၊ ဒေါက်တာဗညားအောင်မိုး နဲ့ ဒေါ်အေးနုစိန် ၊ အရပ်သားဝန်ကြီးအဖွဲ့ဝင်လေးဦးအပြင် နောက်ထိပ်ပိုင်းတပ်ခေါင်းဆောင်တချို့ ရဲ့ မိသားစုဝင်တချို့နဲ့အတူ ကုမ္ပဏီလေးခုကိုပါ အမေရိကန်ဒဏ်ခတ် ပိတ်ဆို့မှု စာရင်းထဲထဲ့လိုက်တာပါ။ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီး ဦးချစ်နိုင်၊ ရင်းနှီးမြုတ်နှံမှုနဲ့ နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်ဆံရေးဝန်ကြီး ဦးအောင်နိုင်ဦး၊ အလုပ်သမား လူဝန်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ လူမှုအင်အားဝန်ကြီး ဦးမြင့်ကြိုင် ၊ လူမှုဝန်ထမ်း ကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီး ဒေါ်သက်သက်ခိုင် တို့အပြင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် နဲ့ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး စိုးဝင်း တို့အပါအဝင် တပ်ထိပ်ပိုင်း ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ ဇနီးတွေနဲ့ သားသမီး ၆ ဦးလည်း ဒီစာရင်းထဲပါသွားခဲ့ပါတယ်။ စစ်ကောင်စီဥက္ကဌ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်နဲ့ နီးစပ်တဲ့ နေပြည်တော်ဒေသစစ်ဆင်ရေးအဖွဲ့မှူး ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး မိုးမြင်းထွန်း နဲ့ စစ်ကောင်စီအတွင်းရေးမှူး ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီး အောင်လင်းဒွေး တို့ သားသမီးသုံးဦးစီပါ အခုလို အမေရိကန်ရဲ့ ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုထဲပါခဲ့ရတာပါ။ အခုလိုချမှတ်ခဲ့တဲ့အပေါ် ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီး ဦးကျော်မိုးထွန်း က ....
ဦးကျော်မိုးထွန်း ။. ။ အမေရိကန်အစိုးရကနေပြီးတော့ Sanction Lists ထဲ ထဲ့တာကို ကျနော်တို့ အများကြီးဝမ်းသာပါတယ်။ အမေရိကန်အစိုးရကိုလည်း ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ နောင်လည်း ဒီလိုမျိုးစစ်တပ်နဲ့ တပ်နိုင်သမျှ Sanction Lists ထဲကို ထဲ့ပေးနိုင်ဖို့ ဆက်လက်မျှော်လင့်နေပါတယ်။
ကိုဝင်းမင်း ။. ။ ဒါအပြင် အခုတခေါက် ထပ်တိုးဒဏ်ခတ်မှုရဲ့ ထူးခြားအရေးပါပုံကို သတင်းစာဆရာ ဦးစည်သူအောင်မြင့် က ........
ဦးစည်သူအောင်မြင့် ။. ။ ဒီ Saction က တော်တော်အရေးပါမယ်ထင်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ ဒီစစ်အာဏာရှင်တွေပေါ့နော်။ ခေတ်တလျှောက်လုံးသူတို့လုပ်ခဲ့တဲ့ဟာတွေက ပြည်သူလူထုတွေကို ဖိနိုပ်နေရုံမကဘူး တဖက်မှာကြတော့ သူတို့ကို Saction တွေဘာတွေ လုပ်ထားသည့်တိုင်အောင် သူတို့သားသမီးတွေကို နိုင်ငံတကာတွေမှာ ပညာတွေရအောင်သင်စေတယ်။ ကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းတွေဘာတွေ နောက်ပိုင်းမှာ ထူထောင်စေတယ်။ ခိုးလို့ဝှက်လို့ရတဲ့ တိုင်းပြည် ဘဏ္ဌာတွေကို လု့ယက်လို့ရတဲ့ဟာတွေနဲ့ သူတို့သားသမီးတွေအတွက် တောက်လျှောက်တည်ဆောက် လုပ်ခဲ့တယ်။ အခုတော့ဒါမျိုးတွေကို Saction ထဲမှာ ထဲ့လာပြီဆိုတော့ အလွန်ထိရောက်တဲ့ Saction ဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။
ကိုဝင်းမင်း ။.။ အခုအမေရိကန်ရဲ့ ဒဏ်ခတ်မှုထဲမှာ သတ္ထုတူးဖော်ရေး ဝန်ဘောင်ကုမ္ပဏီနဲ့ ဆက်စပ်တဲ့ ကုမ္ပဏီသုံးခုနဲ့ ဂြိုလ်တု့ဆက်သွယ်ရေး ဝန်ဆောင်မှု ကုမ္ပဏီ King Royal Technology ကုမ္ပဏီ တို့လည်း ပါဝင်တာမို့ သက်ရောက်မှုရှိနိုင်တဲ့အပေါ် ဦးကျော်မိုးထွန်း က .......
ဦးကျော်မိုးထွန်း ။.။ ဒီစစ်တပ်နဲ့ အလုပ်လုပ်တဲ့ဟာမှာ သူတို့တွေအတွက် အခက်ခဲအများကြီးရှိတယ်။ စစ်တပ်အပေါ်လည်း အများကြီးဖိအားပေးလာနိုင်တယ်။ အခုနကပြောတဲ့ နည်းပညာနဲ့နွှယ်တဲ့ ကုမ္ပဏီတွေဆိုရင်လည်း ဒီလိုမျိုး နည်းပညာတွေသုံးပြီးတော့ လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေ မတရားညှင်းပန်းမှုတွေကို ဒီနည်းပညာတွေသုံးပြီးတော့ CCTVတို့ Drone တို့ဘာတို့က အဲဒီလိုမျိုးသုံးလာတာကို ခက်ခဲလာအောင်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ မည်သည့်အရာကိုမဆို ကျနော်တို့ကြိုဆိုပါတယ်။
ကိုဝင်းမင်း ။.။ ဦးစည်သူအောင်မြင့် ကတော့ စီးပွားရေးအရသက်ရောက်မှုရှိပေမယ့် နိုင်ငံရေးအရတော့ သိပ်မရှိနိုင်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။
ဦးစည်သူအောင်မြင့်။. ။ သူဝင်ငွေနဲ့ သက်ဆိုင်တာပေါ့။ သူတို့သားသမီးတွေနဲ့ စစ်အုပ်စုပိုင်တဲ့ ကုမ္ပဏီတွေကိုပေါ့ ။ ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ ထိရောက်မှုရှိတာပေါ့။ လက်ရှိစစ်အာဏာသိမ်းထားတဲ့ ကိစ္စကတော့ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင် အနေနဲ့ကတော့ နောက်ပြန်ဆုတ်မှာ မဟုတ်ဘူး။ သူတို့အထိနာမှာတော့ မှန်မှာပေါ့။
ကိုဝင်းမင်း ။.။ ဒါပေမယ့် အခုလို ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆိုမှုတွေကြောင့် စစ်ကောင်စီရဲ့ ဖိနိုပ်မှုတွေကိုတော့ အခက်ခဲဖြစ်စေတယ်လို့ ဦးကျော်မိုးထွန်း ကဆိုပါတယ်။
ဦးကျော်မိုးထွန်း ။. ။ ဒီလိုမျိုးတပ်နဲ့နွှယ်တဲ့ ကုမ္ပဏီတွေကို Saction List ထဲမှာ ထဲ့နိုင်လေလေ တပ်ကပြည်သူတွေအပေါ်ဒုက္ခပေးဖို့လုပ်တဲ့အပေါ်မှာ ပိုပြီးတော့ အခက်ခဲဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အပေါ်မှာ ကျနော်မြင်လည်းမြင်တယ်။ ယုံလည်းယုံကြည်တယ်။ ဘယ်အတိုင်းအတာထိဖြစ်လာမလဲဆိုတာကိုတော့ ကျနော်ပြောလိုခက်ပေမယ့်လည်း ဘာပြောပြော ကျနော်တို့ပြည်သူတွေအတွက် အားလည်းဖြစ်စေတယ်။ ကျနော်တို့ပြည်သူတွေအပေါ်လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်အပေါ်မှာ တနည်းတဖုံနဲ့ ဟန့်တားပေးနိုင်တယ်ဆိုတာကို သုံးသပ်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျ။
ကိုဝင်းမင်း ။.။ အဲဒီတော့ နိုင်ငံရေးအရပါ ပိုထိရောက်လာနိုင်အောင် ဦးစည်သူအောင်မြင့် က .....
ဦးစည်သူအောင်မြင့် ။ ။ ကျနော်တို့လည်း ဒီမှာ အနီးကပ်လည်းဖြစ်တယ်။ တရုတ်ကိုတော့ သူလုပ်လို့မရဘူးပေါ့နော်။ တရုတ်ကတော့ ထားတော့။ စင်္ကာပူတို့ဘာတို့ဆိုရင် ရင်းနှီးမြုတ်နှံမှုမှာ အမြင့်ဆုံး တိုင်းပြည်ပဲ။ အဲဒီတိုင်းပြည်တွေနဲ့ ပိုပြီးတော့မှ အမေရိကန်က ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေ ဒီထက်ပိုလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ ဖိအားပေးတဲ့အခါပိုထိရောက်မယ်ထင်ပါတယ်။
ကိုဝင်းမင်း ။.။ ဒီနေရာမှာ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင် ကုလအတွင်းရေးမှူးချုပ်ရဲ့ အထူးကိုယ်စားလှယ် Christine Schraner Burgener နဲ့ ဆွေးနွေးရာမှာ ဒု့ကာချုပ် ဒုဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး စိုးဝင်း ဖက်က အခုလိုဖိအားမျိုးတွေကို နေသားကျ ကျော်လွှာခဲ့ဖူးပြီး အခုလည်း မိတ်ဆွေအနည်းငယ်နဲ့ ဆက်သွားနိုင်တယ်လို့ ပြန်ပြောခဲ့တဲ့အပေါ် ဦးကျော်မိုးထွန်း က.......
ဦးကျော်မိုးထွန်း ။.။ ကျနော်တို့က ၁၉၈၈ ၊ ၁၉ ၉ ဝပတ်ဝန်ကျင်တွေနဲ့ အခုကာလမှာ မတူတော့ဘူးပေါ့နော်။ နိုင်ငံတနိုင်ထဲက ထီးထီးကြီးရပ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အပေါ်မှာ အများကြီးခက်ခဲလာတဲ့အနေအထားမျိုးရှိကြတာပေါ့နော်။ ဒီလိုမျိုးအခြေအနေမှာ အထီးကျန်စွာဆက်နေဖို့ဆိုတာ ပြောထွက်ရက်တာကို စိတ်မကောင်းပါဘူး။ ကျနော်တို့က လူတစု့ထဲနဲ့နေနေရတာမဟုတ်ဘူး။ သန်းပေါင်း၅၄ သန်းနဲ့နေနေရတဲ့အတွက်ကြောင့် လူတွေရဲ့နေမှုထိုင်မှု သာယာဝပြောမှုကို ဆိုးဝါးဆုတ်ယုတ်သွားမယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုတော့ စဉ်းစားစေချင်ပါတယ်ပေါ့နော်။ ဒါကြောင့်မိုလို့ ကျနော်တို့နေလို့ရပါတယ်လို့ ပြောတဲ့ဟာက ဘယ်လိုနေလို့ရပါသလဲလို့ မေးခွန်းပြန်မေးရမယ်ဖြစ်လာတာပေါ့နော်။
ကိုဝင်းမင်း ။. ။ တကယ်တော့ ကုလသမဂ္ဂနဲ့ နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းကလည်း စစ်အာဏာသ်ိမ်းတာကို လက်မခံပဲ ရှေ့မှာ ဖိအားတွေဆက် တိုးလာနိုင်တယ်လို့ သုံးသပ်မှုတွေရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာ။
ကိုဝငျးမငျး ။. ။ ဟုတျကဲ့ ၊မွနျမာစဈကောငျစီမှာပါတဲ့ တိုငျးရငျးသားပါတီအဖှဲ့ဝငျ စောဒယျနီရယျ၊ ဒေါကျတာဗညားအောငျမိုး နဲ့ ဒျေါအေးနုစိနျ ၊ အရပျသားဝနျကွီးအဖှဲ့ဝငျလေးဦးအပွငျ နောကျထိပျပိုငျးတပျခေါငျးဆောငျတခြို့ ရဲ့ မိသားစုဝငျတခြို့နဲ့အတူ ကုမ်ပဏီလေးခုကိုပါ အမရေိကနျဒဏျခတျ ပိတျဆို့မှု စာရငျးထဲထဲ့လိုကျတာပါ။ ပွနျကွားရေးဝနျကွီး ဦးခဈြနိုငျ၊ ရငျးနှီးမွုတျနှံမှုနဲ့ နိုငျငံခွားစီးပှားဆကျဆံရေးဝနျကွီး ဦးအောငျနိုငျဦး၊ အလုပျသမား လူဝနျမှုကွီးကွပျရေးနဲ့ လူမှုအငျအားဝနျကွီး ဦးမွငျ့ကွိုငျ ၊ လူမှုဝနျထမျး ကယျဆယျရေးနဲ့ ပွနျလညျနရောခထြားရေးဝနျကွီး ဒျေါသကျသကျခိုငျ တို့အပွငျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျ နဲ့ ဒုတိယဗိုလျခြုပျမှူးကွီး စိုးဝငျး တို့အပါအဝငျ တပျထိပျပိုငျး ခေါငျးဆောငျတှရေဲ့ ဇနီးတှနေဲ့ သားသမီး ၆ ဦးလညျး ဒီစာရငျးထဲပါသှားခဲ့ပါတယျ။ စဈကောငျစီဥက်ကဌ ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျနဲ့ နီးစပျတဲ့ နပွေညျတျောဒသေစဈဆငျရေးအဖှဲ့မှူး ဒုတိယဗိုလျခြုပျကွီး မိုးမွငျးထှနျး နဲ့ စဈကောငျစီအတှငျးရေးမှူး ဒုဗိုလျခြုပျကွီး အောငျလငျးဒှေး တို့ သားသမီးသုံးဦးစီပါ အခုလို အမရေိကနျရဲ့ ဒဏျခတျပိတျဆို့မှုထဲပါခဲ့ရတာပါ။ အခုလိုခမြှတျခဲ့တဲ့အပျေါ ကုလသမဂ်ဂဆိုငျရာ မွနျမာသံအမတျကွီး ဦးကြျောမိုးထှနျး က ....
ဦးကြျောမိုးထှနျး ။. ။ အမရေိကနျအစိုးရကနပွေီးတော့ Sanction Lists ထဲ ထဲ့တာကို ကနြျောတို့ အမြားကွီးဝမျးသာပါတယျ။ အမရေိကနျအစိုးရကိုလညျး ကြေးဇူးအမြားကွီးတငျပါတယျ။ နောငျလညျး ဒီလိုမြိုးစဈတပျနဲ့ တပျနိုငျသမြှ Sanction Lists ထဲကို ထဲ့ပေးနိုငျဖို့ ဆကျလကျမြှျောလငျ့နပေါတယျ။
ကိုဝငျးမငျး ။. ။ ဒါအပွငျ အခုတခေါကျ ထပျတိုးဒဏျခတျမှုရဲ့ ထူးခွားအရေးပါပုံကို သတငျးစာဆရာ ဦးစညျသူအောငျမွငျ့ က ........
ဦးစညျသူအောငျမွငျ့ ။. ။ ဒီ Saction က တျောတျောအရေးပါမယျထငျပါတယျ။ ဘာဖွဈလို့လညျးဆိုတော့ ဒီစဈအာဏာရှငျတှပေေါ့နျော။ ခတျေတလြှောကျလုံးသူတို့လုပျခဲ့တဲ့ဟာတှကေ ပွညျသူလူထုတှကေို ဖိနိုပျနရေုံမကဘူး တဖကျမှာကွတော့ သူတို့ကို Saction တှဘောတှေ လုပျထားသညျ့တိုငျအောငျ သူတို့သားသမီးတှကေို နိုငျငံတကာတှမှော ပညာတှရေအောငျသငျစတေယျ။ ကုမ်ပဏီလုပျငနျးတှဘောတှေ နောကျပိုငျးမှာ ထူထောငျစတေယျ။ ခိုးလို့ဝှကျလို့ရတဲ့ တိုငျးပွညျ ဘဏ်ဌာတှကေို လု့ယကျလို့ရတဲ့ဟာတှနေဲ့ သူတို့သားသမီးတှအေတှကျ တောကျလြှောကျတညျဆောကျ လုပျခဲ့တယျ။ အခုတော့ဒါမြိုးတှကေို Saction ထဲမှာ ထဲ့လာပွီဆိုတော့ အလှနျထိရောကျတဲ့ Saction ဖွဈမယျလို့ထငျပါတယျ။
ကိုဝငျးမငျး ။. ။ အခုအမရေိကနျရဲ့ ဒဏျခတျမှုထဲမှာ သတ်ထုတူးဖျောရေး ဝနျဘောငျကုမ်ပဏီနဲ့ ဆကျစပျတဲ့ ကုမ်ပဏီသုံးခုနဲ့ ဂွိုလျတု့ဆကျသှယျရေး ဝနျဆောငျမှု ကုမ်ပဏီ King Royal Technology ကုမ်ပဏီ တို့လညျး ပါဝငျတာမို့ သကျရောကျမှုရှိနိုငျတဲ့အပျေါ ဦးကြျောမိုးထှနျး က .......
ဦးကြျောမိုးထှနျး ။. ။ ဒီစဈတပျနဲ့ အလုပျလုပျတဲ့ဟာမှာ သူတို့တှအေတှကျ အခကျခဲအမြားကွီးရှိတယျ။ စဈတပျအပျေါလညျး အမြားကွီးဖိအားပေးလာနိုငျတယျ။ အခုနကပွောတဲ့ နညျးပညာနဲ့နှယျတဲ့ ကုမ်ပဏီတှဆေိုရငျလညျး ဒီလိုမြိုး နညျးပညာတှသေုံးပွီးတော့ လူ့အခှငျ့အရေးခြိုးဖောကျမှုတှေ မတရားညှငျးပနျးမှုတှကေို ဒီနညျးပညာတှသေုံးပွီးတော့ CCTVတို့ Drone တို့ဘာတို့က အဲဒီလိုမြိုးသုံးလာတာကို ခကျခဲလာအောငျလုပျပေးနိုငျတဲ့ မညျသညျ့အရာကိုမဆို ကနြျောတို့ကွိုဆိုပါတယျ။
ကိုဝငျးမငျး ။. ။ ဦးစညျသူအောငျမွငျ့ ကတော့ စီးပှားရေးအရသကျရောကျမှုရှိပမေယျ့ နိုငျငံရေးအရတော့ သိပျမရှိနိုငျဘူးလို့ဆိုပါတယျ။
ဦးစညျသူအောငျမွငျ့။. ။ သူဝငျငှနေဲ့ သကျဆိုငျတာပေါ့။ သူတို့သားသမီးတှနေဲ့ စဈအုပျစုပိုငျတဲ့ ကုမ်ပဏီတှကေိုပေါ့ ။ ဒါတှနေဲ့ပတျသကျလို့ ထိရောကျမှုရှိတာပေါ့။ လကျရှိစဈအာဏာသိမျးထားတဲ့ ကိစ်စကတော့ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီးမငျးအောငျလှိုငျ အနနေဲ့ကတော့ နောကျပွနျဆုတျမှာ မဟုတျဘူး။ သူတို့အထိနာမှာတော့ မှနျမှာပေါ့။
ကိုဝငျးမငျး ။. ။ ဒါပမေယျ့ အခုလို ဒဏျခတျပိတျဆိုမှုတှကွေောငျ့ စဈကောငျစီရဲ့ ဖိနိုပျမှုတှကေိုတော့ အခကျခဲဖွဈစတေယျလို့ ဦးကြျောမိုးထှနျး ကဆိုပါတယျ။
ဦးကြျောမိုးထှနျး ။. ။ ဒီလိုမြိုးတပျနဲ့နှယျတဲ့ ကုမ်ပဏီတှကေို Saction List ထဲမှာ ထဲ့နိုငျလလေေ တပျကပွညျသူတှအေပျေါဒုက်ခပေးဖို့လုပျတဲ့အပျေါမှာ ပိုပွီးတော့ အခကျခဲဖွဈလာလိမျ့မယျဆိုတဲ့အပျေါမှာ ကနြျောမွငျလညျးမွငျတယျ။ ယုံလညျးယုံကွညျတယျ။ ဘယျအတိုငျးအတာထိဖွဈလာမလဲဆိုတာကိုတော့ ကနြျောပွောလိုခကျပမေယျ့လညျး ဘာပွောပွော ကနြျောတို့ပွညျသူတှအေတှကျ အားလညျးဖွဈစတေယျ။ ကနြျောတို့ပွညျသူတှအေပျေါလူ့အခှငျ့အရေး ခြိုးဖောကျမှုတှဖွေဈလာနိုငျတယျအပျေါမှာ တနညျးတဖုံနဲ့ ဟနျ့တားပေးနိုငျတယျဆိုတာကို သုံးသပျနိုငျပါတယျခငျဗြ။
ကိုဝငျးမငျး ။. ။ အဲဒီတော့ နိုငျငံရေးအရပါ ပိုထိရောကျလာနိုငျအောငျ ဦးစညျသူအောငျမွငျ့ က .....
ဦးစညျသူအောငျမွငျ့ ။ ။ ကနြျောတို့လညျး ဒီမှာ အနီးကပျလညျးဖွဈတယျ။ တရုတျကိုတော့ သူလုပျလို့မရဘူးပေါ့နျော။ တရုတျကတော့ ထားတော့။ စင်ျကာပူတို့ဘာတို့ဆိုရငျ ရငျးနှီးမွုတျနှံမှုမှာ အမွငျ့ဆုံး တိုငျးပွညျပဲ။ အဲဒီတိုငျးပွညျတှနေဲ့ ပိုပွီးတော့မှ အမရေိကနျက ပူးပေါငျးဆောငျရှကျမှုတှေ ဒီထကျပိုလုပျမယျဆိုရငျတော့ ဖိအားပေးတဲ့အခါပိုထိရောကျမယျထငျပါတယျ။
ကိုဝငျးမငျး ။. ။ ဒီနရောမှာ မွနျမာနိုငျငံဆိုငျ ကုလအတှငျးရေးမှူးခြုပျရဲ့ အထူးကိုယျစားလှယျ Christine Schraner Burgener နဲ့ ဆှေးနှေးရာမှာ ဒု့ကာခြုပျ ဒုဗိုလျခြုပျမှူးကွီး စိုးဝငျး ဖကျက အခုလိုဖိအားမြိုးတှကေို နသေားကြ ကြျောလှာခဲ့ဖူးပွီး အခုလညျး မိတျဆှအေနညျးငယျနဲ့ ဆကျသှားနိုငျတယျလို့ ပွနျပွောခဲ့တဲ့အပျေါ ဦးကြျောမိုးထှနျး က.......
ဦးကြျောမိုးထှနျး ။. ။ ကနြျောတို့က ၁၉၈၈ ၊ ၁၉ ၉ ဝပတျဝနျကငျြတှနေဲ့ အခုကာလမှာ မတူတော့ဘူးပေါ့နျော။ နိုငျငံတနိုငျထဲက ထီးထီးကွီးရပျနိုငျတယျဆိုတဲ့အပျေါမှာ အမြားကွီးခကျခဲလာတဲ့အနအေထားမြိုးရှိကွတာပေါ့နျော။ ဒီလိုမြိုးအခွအေနမှော အထီးကနျြစှာဆကျနဖေို့ဆိုတာ ပွောထှကျရကျတာကို စိတျမကောငျးပါဘူး။ ကနြျောတို့က လူတစု့ထဲနဲ့နနေရေတာမဟုတျဘူး။ သနျးပေါငျး၅၄ သနျးနဲ့နနေရေတဲ့အတှကျကွောငျ့ လူတှရေဲ့နမှေုထိုငျမှု သာယာဝပွောမှုကို ဆိုးဝါးဆုတျယုတျသှားမယျဆိုတဲ့အခကျြကိုတော့ စဉျးစားစခေငျြပါတယျပေါ့နျော။ ဒါကွောငျ့မိုလို့ ကနြျောတို့နလေို့ရပါတယျလို့ ပွောတဲ့ဟာက ဘယျလိုနလေို့ရပါသလဲလို့ မေးခှနျးပွနျမေးရမယျဖွဈလာတာပေါ့နျော။
ကိုဝငျးမငျး ။. ။ တကယျတော့ ကုလသမဂ်ဂနဲ့ နိုငျငံတကာအသိုငျးအဝိုငျးကလညျး စဈအာဏာသိမျးတာကို လကျမခံပဲ ရှမှေ့ာ ဖိအားတှဆေကျ တိုးလာနိုငျတယျလို့ သုံးသပျမှုတှရှေိနပေါတယျခငျဗြာ။